विवादमा मुछिएपछि मन्त्रि आलेको राजीनामा माग ! - jagritikhabar.com
विवादमा मुछिएपछि मन्त्रि आलेको राजीनामा माग !
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले वि’वादमा मु’छिएका छन् । आलेले भारतमा रहेका भनिएका एक जना एमाले कार्यकतालाई उठाउने (अ’पहर’ण) गर्ने ध’म्की दिए पछि चौतर्फी आ’लोचना भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘जथाभावी प्रतिक्रिया’ लेखेको भन्दै आ’क्रोशि’त रहेका मन्त्री आलेले टेलिफोनमार्फत एक युवालाई ‘अ’पह’रण’सम्मको ध’म्की दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । मन्त्री आलेले ध’म्की दिँदै गरेको फोन वार्ता यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनको सर्वत्रराजिनामाको माग उठेकाे छ ।
एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले पनि आलेको उक्त ध’म्कीको आलोचना गरेकी छिन् । ‘हद नाघेर अ’श्लि’ल बोल्ने आमालाई समेत जोडेर धावा बोल्ने प्रेम आलेलाई तुरुन्त बर्खास्त गर’ भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट माग गरेकी छिन् । याे संवाद एमाले कार्यकर्ता जगत ओलीकाे फेसबुकबाट सार्वजनिक गरिएकाे छ ।
यस्तो छ, मन्त्री आले र युवाबीचको संवादको सम्पादित अंश, संवादमा अ’श्लि’ल शव्दकाे प्रयाेग भएकाले ती शव्द हटाइएकाे छ ।
मन्त्रीः ‘कहाँ हुनहुन्छ तपाईं?’ युवाः इन्डियातिर छु’ मन्त्रीः अनि तपाईंको कमेन्ट हेरे मैले, के लेख्या त्यस्तो यार ?’ युवाः ‘हैन हजुर, हामीले पनि यस्तो आशा लागेको थिइन् ?’ मन्त्रीः कस्तो आश ? युवाः तपाईंबाट पनि यस्तो हुन्छ भनेर आशा गरेका थिएन,’ (मन्त्री आले आ’क्रो’शि’त हुन सुरु गर्छन)
युवाः के गरेको छु ?मन्त्रीः तलाई मा…. त्यही ठाउँवाट उठाउँछु म, कुन ठाउँमा छस भन त,’युवाः आउन त यता आऊँ, बम्बईमा छु म’मन्त्रीः तेरी मा…. भन त ठाउँ भन, मुम्बई कहाँ छस, तलाई त्यही ठाउँबाट उठाएर ल्याउँछु तलाई, मुम्बई कहाँ छस तेरी मा….’
युवाः आउन आउ… आइजो न आइजो, त मुला बेसरम… तस्कर…मन्त्रीः मुम्बई कुन ठाउँ होस भन त ?युवाः तस्कर मुला… बेसरम, लाज छैन, तस्कर… मन्त्रीका लागि बेची खाने तस्कर’मन्त्रीः जे पायो, त्यही लेख्छस मा…कुकुर…तलाईं मा… कुकुर त्यही आएर खुटासुटा का’टे’र साला प्या’क गरेर राख्छु ।युवाः मलाई ? तँ के गर्छस् भन न ?
युवाः त मा… कहाँ छस भन त ?मन्त्रीः तँ … छोरा होस क्या, त चु’तियाँ साले, मु….. ‘तस्कर, नौ महिना जेल बसेर आएको होइनस् मुला, मलाई सिकाउँछस ?’मन्त्रीः त मा…. ट्वालेट सफा गर्छस् …. का छोरा, मलाई सिकाउँछस ?युवाः त मुला जस्तो होइन क्या म चर्पी सफा गरेर खाने, आइजो न म के काम गर्छ ?
मन्त्रीः भन त तँ कहाँ छस ? तलाई त्यहीबाट उठाइदिन्छु ।युवाः त आइजो न एकैलात्ती हाने पछि उता गिर्नेवाला छस ?मन्त्रीः बम्बई कुन ठाउँमा छस, भन त कुकुर ….का छोरी ।युवाः बम्बई भन्या त पहिला तलाईं…अधेँरी छु भनेर, तेरो को मान्छेलाई पठाउने हो पठा त ?मन्त्रीः तेरी मा…. तेरो ठेगाना पठा त ?
युवाः अधेँरी छुु, अधेँरी…सुन न तलाई ठेगना भन्छु त तेरो मान्छेको नम्बर दे न त ।मन्त्रीः लोकेसन नि पठा त ?युवाः अरे, नम्बर पनि म्यासेन्जर पठाएको छु, हेर न मुला ।मन्त्रीः तेरी मा… तलाई पख, एकपटक तलाई त्यहीँबाट उठाइदिन्छु । यही संवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि राजीनामाको माग उठेको छ ।